Haweenka Puntland xaq ma u leeyihiin ka mid noqoshada baarlamaanka Puntland? (dhegayso) – Radio Daljir
Haweenka Puntland xaq ma u leeyihiin ka mid noqoshada baarlamaanka Puntland? (dhegayso)
Seteembar 1, 2018 10:45 b 0
Xilli Puntland ay ku soo fool leedahay doorashada baarlamanka Puntland bilaha soo socda haatana ay socoto soo xulista golayaasha degaanka Bosaso iyo Baran ayaa waxaa baaq ku sabsan tixgalinta haweenka ee kuraasta labadadaasi doorasho dirtay gudoomiyaha haweenka Puntlland Khadra warsame jaamac .
Waxay sheegtay inay nasiib daro ahayd in golaha degaanka garoowe oo la soo dhameystiray doortayna gudoomiye lagu daro oo kaliiya laba haween waa sida ay hadalka u dhigtaye waxayna sheegtay in ilaa shan gabdhood ay isu soo tagaeen balse laga tagey .
Isimada leh soo xulista baaarlamanka Puntland ayey ugu baaqday inay i gooni ah ku Eegaan haweenka ooo wax laga badalay qaabkii iyo tiradii haweenk aee horay u gali ijiray baalamaanka Puntand .
Ugu danbeyntii ayey u gu baaqday haweenka inay ciyaaraan doorkooda siyaasadeed ayna galaan dadadaal dheeri ah si ay uga mira dhaliyaaan hadafyadooda siyaasadeed.
Wasaaradda deegaanka oo mashaariic ka wada Xarfo iyo Burtinle (dhegayso)